ပုရိသတွေ ရင်ဖိုအောင်လို့ ဗီဒီယိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ချပြလာတဲ့ ခြူးလေး – Shwe Yoe
ပုရိသတွေ ရင်ဖိုအောင်လို့ ဗီဒီယိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ချပြလာတဲ့ ခြူးလေး
ဒီကနေ့မှာတော့ ခြူးလေးက ဖုန်းလေးတစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေကို ချပြလာပါတ ။ခြူးလေးက “သင်တန်း တက်ခဲ့စဉ်က Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုန်းလေးနဲ့ ဘဲ အစဆုံး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ခဲ့ပုံလေး ပါပေါ့ … နောက်ခံ တီးလုံးလေး အကြိုက်ဆုံး ….” ဆိုပြီး သူမကိုယ်တိုင် အစအဆုံးဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အခုလိုပဲ မျှဝေပေး လာပါတယ်။
ခြူးလေးကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အသစ်အသစ်သော အနုပညာတွေကို ချပြနိုင်ဖို့အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ခြူးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင် တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးလေး တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ခြူးလေးက “ပန်းနုသွေး”၊ “ပို၍လှသောမနက်ဖြန်”၊ “ပဉ္စလက်ရွာ”၊ “ချစ်ရပါသောနွေ”၊ “နွေ လည်ညရဲ့လမင်း” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကာရိုက်တာတွေကို အမျိုးမျိုး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ခြူးလေးက ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ အနုပညာကဝေမလေးလို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။ခြူးလေးကလည်း သူမရဲ့ ပရိသတ် တွေအတွက် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ မရိုးနိုင် တဲ့ အနုပညာအသစ်တွေကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ခွူးလေးက ဖုနျးလေးတဈလုံးတညျးသာ အသုံးပွုပွီး သူမ ကိုယျတိုငျ အစအဆုံးဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးတဈပုဒျကို ပရိသတျတှကေို ခပြွလာပါတယျ။ခွူးလေးက “သငျတနျး တကျခဲ့စဉျက Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုနျးလေးနဲ့ ဘဲ အစဆုံး ကိုယျတိုငျ ဖနျတီး ခဲ့ပုံလေး ပါပေါ့ … နောကျခံ တီးလုံးလေး အကွိုကျဆုံး ….” ဆိုပွီး သူမကိုယျတိုငျ အစအဆုံးဖနျတီးဖွဈခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အခုလိုပဲ မြှဝပေေး လာပါတယျ။
ခွူးလေးကတော့ ပရိသတျတှအေတှကျ အသဈအသဈသော အနုပညာတှကေို ခပြွနိုငျဖို့အတှကျ အားသှနျခှနျစိုကျကွိုးစားနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးလညျး ခွူးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကွညျ့ပွီး သဘောကကြွမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျ တဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
ဇာတျလမျးတှဲမငျးသမီးလေး တဈလကျဖွဈတဲ့ ခွူးလေးက “ပနျးနုသှေး”၊ “ပို၍လှသောမနကျဖွနျ”၊ “ပဉ်စလကျရှာ”၊ “ခဈြရပါသောနှေ”၊ “နှေ လညျညရဲ့လမငျး” စတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိလာတာ ဖွဈပါတယျ။မတူညီတဲ့ ဇာတျရုပျကာရိုကျတာတှကေို အမြိုးမြိုး သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ ခွူးလေးက ဒီဘကျခတျေရဲ့ အနုပညာကဝမေလေးလို့တောငျ တငျစားလို့ရပါတယျ။ခွူးလေးကလညျး သူမရဲ့ ပရိသတျ တှအေတှကျ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ မရိုးနိုငျ တဲ့ အနုပညာအသဈတှကေို ခပြွဖို့ ကွိုးစားနသေူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ နှစ်ခါပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင်ကို လှလွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်
ရန်ကုန်ကျဆုံးလေးယောက်အတွက် ဂလဲ့စားပြန်ချေပြမယ်လို့ ပြည်သူတွေကိုဂတိပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း